Umatshini wokwenza i-Atc 3 we-Axis Woodworking Machinery 1325 CNC Router yoMvelisi kunye noMthengisi | Ngaphezulu
Umatshini we-3D CNC umzila
ATC CNC kumzila kunye Automat ...
Intengiso eShushu I-Wood Door Ukwenza umatshini we-Atc 3 Axis Woodworking Machinery 1325 CNC Router
* I-cooled cooled air (HQD okanye i-Italy HSD spindle), umgangatho ophezulu kunye no-24h ngokuqhubekayo usebenza.
* HIWIN kaloliwe wesikwere, ukubambeka okuhle kunye nokuqina, akukho kugqwetha kokusebenzisa ixesha elide.
* Ukudluliselwa kwesantya esiphakamileyo se-rack ye-XY axis, kunye nokuhanjiswa okuphezulu kwebhola yokuhambisa ibhola kwi-axis ye-Z,
Ukuqinisekisa isantya esiphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu ngaxeshanye.
* I-Pneumatic ATC yezixhobo zokuluka ezi-3 ezinezixhobo ezahlukeneyo.Ukutshintsha kwesixhobo esizenzekelayo kugcina ixesha lokutshintsha izixhobo ngesandla.
* Umshini itheyibhile nempompo lwepolitiki, unako ngokukhawuleza nangokuzinzileyo ukulungisa izinto phezu kwetafile, nokukrola, ixesha ukonga kunye nobomi inkonzo ende.
* Inkqubo yolawulo: Sisebenzisa inkqubo ye-Dsp, iNc-studio yolawulo, iSyntec yaseTaiwan okanye i-OSAI yase-Europ.
Umzekelo I-APEX1325 / APEX1530 / APEX2030 / APEX2040
Indawo yokusebenzela 2500 * 1300mm / 3000 * 1500mm / 3000 * 2000mm / 4000 * 2000mm
Inkqubo yolawulo Ulawulo lweNcstudio, ukhetho lwe-NK280, SYNTEC
Iimoto nabaqhubi Imoto yenyathelo / imoto yeServo
Isikhokelo sikaloliwe I-Taiwan HIWIN isikhokelo sikaloliwe wesikwere
Indlela yokuhambisa Ukuchaneka okuphezulu kwezixhobo zokubeka
Ubume betafile Umshini kunye netafile yeT-slot
Isantya sokusebenza 8-15m / min
Ubume beTafile Isakhelo seSinyithi esinesinyithi
Yokuluka Power 3.5kw / 4.5kw / 5.5kw / 9kw ukupholisa umoya othini
Isantya esiphezulu I-24000 RPM
Ukuhamba rhoqo kweDrive Inverter yokulinganisa / inverter yeDelta
Inkqubo yokupholisa Umoya wombane ucolile
#Iipneumatic 3 iintloko zokupholisa umoya:
3.5kw / 4.5kw / 5.5kw ukupholisa umoya yokuluka
Isikhokelo soLoliwe seLinear:
I-PMI / i-THK isikhokelo somgaqo wokuchaneka koomatshini ngesantya esiphezulu. Umsebenzi wokonga umbane kunye nobomi benkonzo ende.
#Yaskawa servo iimoto nabaqhubi:
Samkela iJapan YASKAWA Servo yemoto, uphawu lwe-servo yeemoto ezidumileyo emhlabeni, ukusebenza ngokugudileyo, ukungcangcazela ngesantya esisezantsi, akukho ukwehla kabukhali nakwisantya esiphezulu, amandla omthwalo olomeleleyo, ukusebenza kolawulo oluthembekileyo, njl.
Isantya esiphezulu, ukuchaneka kwe-CNC ngokuchanekileyo. Jonga-phambili ngeebhloko ezingama-256 esele zibaliwe ngelixa ulawulo lokuhambisa phambili luphucula ukulandelela kunye nokuchaneka komchamo. Lawula isixhobo semagazini, isixhobo sobomi, kunye nokuninzi.
I-WMH Herion i-helical rack kunye ne-pinion drives zibonelela ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
Uyilo olomeleleyo luqinisekisa ubomi benkonzo ende kunye nolondolozo oluncinci. Iyakwazi ukuhambisa imithwalo enzima ngokuchanekileyo.
Baleka uthule kwaye upholile. Uyilo olungaphantsi kweoyile oluyi-100% kunye nobomi obude be-vane buqinisekisa ukugcinwa okuncinci.
(1) icandelo lokwenza izinto:
Umatshini wokukrola unokusetyenziselwa ukukrola imithi, iibhokisi zegolide, iimveliso zokuhombisa kunye nobucwebe obukhethiweyo njalo njalo.
(2) Icandelo lentengiso:
Umatshini wokukrola ungasetyenziselwa ukukrola iintlobo zeempawu, iilogo, iibheji, iiphaneli, ubugcisa kunye nokuhombisa, umhombiso wasekhaya.
(3) Amanye amashishini:
Ingasetyenziselwa ukuzoba, imihlaba, ukubiza, ukutywina kunye nezinye izinto zobugcisa kunye nemifanekiso eqingqiweyo kunye neminye imveliso.
Siya kuhlala silapha ukubonelela ngalo naluphi na ulwazi olifunayo ngexesha lokuqala, kwaye sinike iingcebiso zobungcali ngokweemfuno zakho zokwenene simahla;
Siza kujongana nayo yonke imveliso kunye nemicimbi yokuhambisa ngenqanawa, emva kokuba yonke into ilungile, singakuxelela ukuba yonke into ihamba kakuhle apha;
3. Emva kokuthengisa:
Siza kubonelela ngencwadi yokusebenza yesiNgesi.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngexesha lokusebenzisa kunye nokugcina, iinjineli zethu ezinokuthetha isingesi esihle kakhulu ziya kukuphendula kwi-Intanethi okanye ngokufowuna.
5.Machine iwaranti yiminyaka emibiniKe ukuba umatshini wakho unakho nawuphi na umonakalo ongacwangciswanga, siya kubonelela ngezinto simahla.
Ukuba umatshini wakho uneengxaki ezinkulu ukuba nangaliphi na ithuba, iinjineli zethu ziya kufika apho ukulungisa ingxaki kunye nokulungisa.
Yintoni ekufuneka sinikele ingqalelo kuyo xa ufaka i-cnc router router?
Emva kwe- i-cnc umzila Kuyathengwa, kuyindalo ukufaka kunye nokulungisa ingxaki. Nokuba umenzi unikezela ngeenkonzo ezinjalo, kufuneka sizilungise ngokwethu. Ke ngoko, kufuneka sifunde ukuyifakai-cnc umzila ngokuchanekileyo. Ke, yeyiphi imicimbi ekufuneka ihlawulwe xa ufaka ifayile ye- i-cnc umzila?
1. Sukuyifaka ifayile ye- i-cnc umzila Ngexesha lombane okanye lokuduma, kwaye ungafaki isokethi yamandla kwindawo emanzi, kwaye ungachukumisi intambo yombane engavalwanga, kungenjalo iingozi zombane ziyakwenzeka ngokulula.
2. Umfakisi we i-cnc umzila kufuneka ube nokuqonda okunzulu ngefayile ye cnc umzila matshini, kwaye ube nakho ukuwusebenzisa kunye nokuwusebenzisa ngokwemiqathango yokunciphisa ukubakho kweengozi.
3. Umbane wombane we i-cnc umzila iyafuneka ukuba ibe yi-210V-230V. Ukuba umbane awuzinzanga okanye kukho izixhobo zombane eziphezulu ezijikeleze umbane, umbane olawulwayo kufuneka ufakwe phantsi kolawulo lweengcali.
4. Iqokobhe le i-cnc umzila yenziwe ngentsimbi, ke ucingo olusezantsi kufuneka luqhagamshelwe ukuqinisekisa ukhuseleko lwemveliso. Intambo ye-plug-in kufuneka iqhutywe xa kucinyiwe umbane, kwaye ukusebenza ngokukuko akuvumelekanga ngokungqongqo.
5. Icandelo lesakhiwo se-CNC umzila isebenzisa i-aviation aluminium castings, ethambileyo kwaye ithambile, ke musa ukusebenzisa amandla amaninzi xa ufaka izikhonkwane ukunqanda ukutyibilika.
Egqithileyo Umqokeleli wothuli
Okulandelayo: 3 Axis CNC umzila Wood nangokukrola Machine for MDF Kitchen iKhabhinethi Ifenitshala
iintloko ezininzi kunye nezixhobo ze-cnc router
Iintloko ezininzi umatshini cnc umzila
Umatshini wokukrola wokhuni
umatshini wefenitshala yomatshini weenkuni
CNC umzila Machine 4 Axis EPS for Foam, Wood, A ...
Intengiso kwixabiso elingenaxabiso 2030 iintloko ezintandathu zemoto ...
CNC umzila 3 Axis EPS Amagwebu Cutting Machine Sink ...
I-APEX CNC umzila weentloko ezininzi ze-3D kunye ne-12 zokuluka ...
ATC CNC umzila kunye Zenzekelayo Isixhobo ngokutshintsha Spin ...
Ngokubanzi kusetyenziswa Isixhobo Auto Tshintsha Wood Design Engra ...